साम्राज्ञीको छायाँमा रेविका ? « Mazzako Online
साम्राज्ञीको छायाँमा रेविका ?
नायिका साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाह हिरोलाई पनि छायाँमा पार्न सक्ने नायिका हुन् । उनको अब प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र हो, मारूनी । चलचित्र मारूनीमा साम्राज्ञी सगै नायक पुष्प खड्का मुख्य भूमिकामा छन् र यसै चलचित्रबाट रेवीका गुरुङले डेब्यु गर्दै छिन् । तर उनी साम्राज्ञीको छायाँमा हराउने भन्ने खालको टिप्पणी फिल्म रिलिज अगाडि नै आईसक्यो र चलचित्रको पहिलो गीत रिलिज कार्यक्रममा पनि यस्तै देखियो ।
केहि दिन अगाडि चलचित्र मारूनीको पहिलो गीत रिलिज गरियो । दिपक बज्राचार्यको स्वर र संगीतमा रहेको उक्त गीतमा पुष्प र साम्राज्ञीको नृत्य थियो । क्लब सङ् मा निकै हट देखिएकी साम्राज्ञीको नै खोजी र चर्चा भयो कार्यक्रममा । सबैले साम्राज्ञीको नै वाह वाही गरे । हुन त उनलाई पहिला त्यती हट बनेर क्लबमा डान्स गरेको चलचित्रमा देख्न पाईएको थिएन । त्यसैले होला सबै उनको तारिफमा नै व्यस्त भए । चलचित्रको एक्लो हिरो पुष्पले पनि राम्रो अटेन्सल पाए तर नव नायिकालाई वास्ता गर्ने निकै कम थिए ।
साम्राज्ञीको अगाडि उनले पाउनु पर्ने स्पेस नपाएकै देखिन्थ्यो । मिडियाको लागि रेवीका नयाँ त होइनन् पनि । चलचित्र लिली बिलीमा उनी हुने पक्कापक्की थियो र चलचित्रको पहिलो प्रेस मीटमा पनि उनी उपस्थित थिईन् । तर पछि उनी चलचित्रमा भने देखिईनन् । उनको ठाउँमा नायिका प्रियंका कार्की प्रवेश भईन् । धेरै समयपछि रेवीकाले मारूनी बाट डेब्यु गर्ने भईन् तर यहाँ साम्राज्ञी पनि छिन् । उनलाई केहि असहज त पक्कै हुन्छ ।
जसरी उनी गीत रिलिज कार्यक्रममा छायाँमा परिन् त्यसरी नै यदि चलचित्रको कथामा पनि छायाँमा छिन् भने उनको डेब्युले सफलता पाउन गाह्रै पर्छ । साम्राज्ञी आफुलाई नयाँ कलाकारलाई सिकाउन मन पर्ने बताउछिन् । उनले रेविकालाई के सिकाईन् होला ? धेरै कुरा सिकाउदा अरूको छायाँमा कसरी नपर्ने भन्ने कुरा पनि सिकाईदिएको भए हुन्थ्यो कि ?